Tsia, ny iPhone 13 dia tsy mampiseho ny isan-jaton'ny bateria ao amin'ny tsipika fananganana | Vaovao IPhone
Ora vitsivitsy talohan'ny fanombohan'ny fampisehoana ny modely iPhone 13, iPad ary Apple Watch vaovao Sary nivezivezy tao amin'ny tambajotra izay ahitanao iPhone miaraka amin'ny isan-jaton'ny batterie eo akaikin'ny toerana misy anao, eo amin'ny tsipika fitehirizana.
Farany dia toa tsy misy dikany ny zava-drehetra, farafaharatsiny farafaharatsiny amin'ny alàlan'ny fitaovana. rehetra Ireo pikantsary azontsika jerena momba ny iPhone 13 sy ilay iPhone 13 Pro vaovao dia mbola tsy mampiseho ny isan-jaton'ny bateria aryn ny ankavanana ambony, manondro fa tsy izany no izy.
Afaka mampiditra an'ity fampahalalana momba ny bateria ity amin'ny tsipika momba ny toe-javatra ve ilay mpampiasa ao amin'ny fikirana fikirakirana? Tsy fantatsika izany amin'izao fotoana izao fa ny toa mazava dia ny simulator Xcode 13 ho an'ny iPhone 13 Pro Max vaovao dia manana toerana malalaka hanehoana ny fampahalalana momba ny fandrakofana sy ny bara Wi-Fi. Amin'izao fotoana izao, ireo izay nanantena ny hahita ity fampahalalana momba ny batterie ity miaraka amin'ny isan-jato izay tsy manipy lamba famaohana, mety ho safidy iray no ampiana ao amin'ny fikirakira ahafahana miseho.
Amin'izao fotoana izao, ny zavatra hainay mazava dia ny safidy hanampiana na hamafana ity fampahalalana ity (isan-jaton'ny bateria) amin'ny iPhones izay tsy manana ny notch, dia misy izany, ka izay te-hahita ity fampahalalana ity dia tokony tsy ho very fanantenana. Afaka herinandro latsaka kely dia hofongarantsika ny fisalasalana rehefa manomboka hita ny fanamarihana voalohany momba ny iPhone 13 vaovao, azo antoka fa amin'ny sasany amin'izy ireo dia ho hitantsika raha azo atao ny mampiditra an'io fampahalalana io amin'ny tsipika misy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Tsia, ny iPhone 13 dia tsy mampiseho ny isan-jaton'ny batterie ao amin'ny tsipika fizarana